ဆန်းသစ်သော – Grab Love Story
မြောက်ဥက္ကလာကိုပြန်သော မီနီဘက်စ်လေးထိုးရပ်လာတော့ လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူ မသီတာလဲကားပေါ်တိုးတက်လိုက်ရသည်။ အရမ်းကြီးမကျပ်သော်လည်း လူအပြည့်နှင့်ပင်။ ဒါတောင် စနေနေ့နေ့လည်ခင်းပဲရှိသေးသည်၊ ရုံးဆင်းချိန်ဆိုလျှင်ကားပေါ်တက်ဖို့တောင်မနည်း။ သီတာက ရန်ကုန်မှာအလုပ်လာလုပ်တာ ၃နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ ရန်ကုန်ပါးဝနေပြီဆိုပါတော့။ သူတို့နားက ကုန်စုံဆိုင်မှလုပ်ရင်းတဖက်က ပွဲစားတောင်လုပ်နေပြီး သူတို့မြောက်ဥက္ကလာ အဝိုင်းကြီးထိပ်နားမှာတင် သူပွဲစားလုပ်ပေးထားတာ တော်တော်များပြီ။ ဒီနေ့လည်း မြို့ထဲမှာ အိမ်ရောင်းမယ့်သူရှိလို့စကားပြောပြီး ပြန်လာတာ။ ရေခဲဆိုင်နားရောက်တော့ လူတစ်အုပ်တက်လာပီး အတော်ကျပ်သွားသည်။ မတ်တပ်ရပ်သူတွေနှစ်တန်းကနေ သုံးတန်းဖြစ်သွားသည်။ သူ့နောက်မှာတော့ ခုနကသူ့ကိုကွတ်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်နေသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ အမူးသမားတွေ ကုလားတွေနဲ့စာရင်တော့ တော်သေးတာပေါ့ဟုတွေးသည်။
ရန်ကုန်မှာဘက်စ်ကားစီးရင်ဒီလိုပဲ မသီတာလိုအိုးကောင်းကောင်းမျိုးဆိုလျှင် အထောက်ခံဖို့သာပြင်ထားပေတော့ပဲ၊ ကံကောင်းတာတစ်ခုက သူကလဲကြိုက်တယ်လေ။ ယောကျာင်္းနဲ့အနေဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုကိစ္စဖြစ်လာရင်သူမအတွက် ဖြေရှင်းစရာနှစ်နည်းပဲရှိတယ်။ တစ်နည်းက သူနှင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ငြိထားသော သူ့ကုန်စုံဆိုင်သူဌေး ဦးအောင်မိုး၊ သူကတော့ သူမကိုတွေ့လျှင်ငန်းငန်းတက် ပြောတာတော့ သူ့သမီးအကြီးမကြီးနဲ့တူလို့သူ့စိတ်ထရပါသတဲ့ ကဲ။ အဖိုးကြီးဖြစ်လို့သိပ်ဆန္ဒမပြည့်ဝသလို သူလဲသိပ်ဖီလ်းမလာ၊ သူအဖိုးကြီးဆီမသွားကြာပြီ။ နောက်တစ်ခုက ခုလိုကားပေါ်ကရသေ့စိတ်ဖြေလေးတွေ၊သူတို့က ကားစီးနေရင်း ကားပေါ်မှာထောက်ရင်းဖီလ်းခံ၊ သူမက သူ့ဖင်ကြားထဲလာထောက်နေတဲ့ လူရဲ့ဆိုဒ်ကိုမှန်းပြီးဖီလ်းတက်၊ မှတ်တိုင်ရောက်တော့ သူ့လမ်းသူသွး ကိုယ့်လမ်းကိုသွားပဲ ရှင်းတယ်၊ ဘယ်သူမှမသိဘူး။ ဟိုတခေါက်ကတော့ သူ့ဖင်ကြားထဲ နွေးနွေးထွားထွားကြီးလာထောက်ထားတော့ ရင်ခုန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာ စတီးထမင်းချိုင့်လေးဖြစ်နေလို့ ရီရသေးတယ်၊ တစ်ခါတလေ ကုလားတွေလာထောက်ရင်တော့ သူမကြိုက်ပေ။ မသီတာမှ အချောအလှကြီးတော့မဟုတ် ရိုးရိုးသာမန်မိန်းမ အသက်၃၆ အိမ်ထောင်ရှိ ရွှေတောင်သူ အကိတ်တစ်ယောက်။
အသက် ၃၆ကလေးတစ်ယောက်အမေဆိုတော့ ဗိုက်ခေါက်လေးမဆိုစလောက်ရှိတာကလွဲပြီး ကျန်တာကတော့သရေယိုစရာ ဆိုတော့ကာ ကားပေါ်ရောက်လျှင် အထောက်ခံရသမြဲ။ ရုတ်တရက် လူတွေပြန်ဆင်းသွားတော့နဲနဲပြန်ချောင်သွားသည်၊ သို့သော် သူ့နောက်က ကောင်လေးကမခွာသေး။ လူက နှစ်ဆယ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်၊ အောက်ကပူပူနွေးနွေးလေးကလဲ ထာက်ထားတာက ကလေးလိုပဲ။ အင်း ခလေးတွေအတက်ကောင်းတွေတက်နေတာ။ သူ စချင်နောက်ချင်စိတ်နှင့် သူ့ဖင်ကိုမသိမသာ အနောက်နဲနဲတိုးပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကောင်လေး မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ထင်တယ် တခြားလူတွေဆို ပိုကပ်လာမယ်ဖြစ်သော်လည်း ကောင်လေးကတော့အနောက်လဲနဲနဲပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ ခနနေတော့ ပြန်လာကပ်သည်၊ လက်ကိုလဲ အပေါ်တန်းကိုင်လိုက် ပြန်ချလိုက်နဲ့ သူဖင်နဲ့မထိ ထိအောင်လုပ်နေတာ စိတ်မရှည်ချင်စရာဖြစ်သည်။ သူ့ရှေ့ထိုင်ခုံက လူဆင်းသွားပြီး မသီတာထိုင်လိုက်တော့ ကောင်လေးကဘေးမှာလာရပ်သည်။ မော့မကြည့်သော်လည်းသေချာတာကတော့ သူမအကျီလည်ဟိုက်ထဲမှ တစွန်းတစပေါ်နေသောသူမရင်သားတွေကိုငုံကြည့်ပီး စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီထင်၏၊ လက်မောင်းကိုလာကပ်သောသူ့ပေါင်ကြားမှာ နွေးနွေးကြီးကမာလာသည်။ မှတ်တိုင်မှာလူတွေထပ်တက်ရ်ျ ခါးပိုက်နှိုက်ရန်ကြောက်သလို သူ့ကျောပိုးအိတ်ကိုအရှေ့မှာပြောင်းလွယ်ပီးကိုင်ထားလေတော့ လူတိုးရင် သူ့လက်လေးက မသီတာနို့အုံနားရောက်ရောက်လာသည်။
ဒီကောင်လေးအကြံဥာဏ်များပြီထင်သည်။ မော့ကြည့်လိုက်တော့ တကယ်ကလေးချောလေး အသားဖြူဖြူမှာ မျက်နှာနဲနဲနီနေသည်။ မသီတာကလေးကိုစချင်လာသဖြင့် မသိမသာ ရင်ကိုပိုမောက်လိုက်ပြီး သူ့ဘက်နဲနဲကပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့လက်လေးနဲ့ထိမိသွားတယ်၊ သူကကိုယ့်ကိုလာထိတာမဟုတ် သူလက်ကိုကိုယ့်နို့နဲ့သွားထိတာဆိုတော့ ကောင်လေး လန့်သွားသည်ထင်သည်။ ချွေးတွေဘာတွေထွက်လာတာမြင်ရတော့ မသီတာရီချင်လာသည်။ သူနိုင်လို့ရလောက်သည့်အရွယ်မို့ရော၊ သူထိကြည့်ချင်တာ ထိကြည့်ပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ရော မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ ကောင်လေးက အတွေ့အကြုံမရှိအသစ်လေးဖြစ်သော်လည်း အတောင့်စားအမကြီးတစ်ယောက်က ပေးတာကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ယူရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်။ သူ့မှာ ဒီနို့ကြီးတွေကို ထိလဲထိကြည့်ချင် အော်လိုက်မှာလဲကြောက်နှင့် ချွေးတွေပင်ထွက်လာရသည်။ အထိအတွေ့ကတော့ ဘာကောင်းသလဲမမေးနှင့် သူဖြေတက်မှာမဟုတ်။လူတွေတိုးတော့ အရှေ့ကိုင်းသလိုလိုဘာလိုလိုနှင့် မသီတာရင်အုံတစ်ခုလုံးကိုလာထိသည်။ အဲ့လောက်မရဲဟုထင်ထားသော မသီတာမှာ အံ့သြရသည်၊ ကိုယ်ဟန့်ဖို့ပြန်လုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ကောင်လေးရှက်သွားမှာ ကောင်လေး မျက်နှာညှိုးသွားမှာ စိုးသဖြင့်ရော မသိသလိုသာနေပေးလိုက်တော့သည်။
သူ့ယောင်္ကျားကိုင်သလို တစ်အုံလုံးကိုင်တာမှဟုတ်တာ နို့ဘေးသားလေးကိုလက်နဲ့ထိရုံပဲဥစ္စာ ဘာဖြစ်လဲ၊ ဒီကောင်ချောလေးကျေနပ်တာကို သူပျော်နေသလိုခံစားရသည်။ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ ကောင်လေးစိတ်ဝင်စားခံရရ်ျ စိတ်လှုပ်ရှားတာလဲဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီကောင်လေးကလဲ အတော်ရောင့်ရဲသည် ဒီထက်ဘာမှပိုမတက် ခုနအတိုင်း ထိထားရုံလေးနဲ့ငြိမ်နေသည်။ ခဏကြာတော့ လူတွေချောင်သွားပီး သူ့ဘေးကလူလဲဆင်းသွားတော့ သူဘေးရွှေ့လိုက်ပီး ကောင်လေးကိုပြုံးပြပြီး ဝင်ထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်မိသည်။ လာ မောင်လေး ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ ဘယ်ပြန်မှာလဲ အဲ ဟို မြောက်ဥက္ကလာပါ ကောင်လေးမျက်နှာချွေးပြန်နေပီ ဟင်းဟင်း မောင်လေးက မြောက်ဥက္ကလာမှာနေတာလား မှုတ်ဝူးဗျ အဒေါ်လူတယောက်ရှာခိုင်းလို့ပါ သြော် … ကျောင်းတက်နေတာလား အမှန်တော့ ကောင်လေးကိုသူစကားပြောချင်ရ်ျသာစကားတွေဆက်များနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်လေးက ဆက်ကန်းရီးယားကွန်ပြူတာဖြစ်ကြောင်းပြန်ဖြေပီး သူတို့စကားတွေဆက်သွားသည်။
ဒီလိုကောင်အထက်တန်းစားကောင်ချောချောလေးနဲ့ စကားဖောင်ဖွဲ့နေရတာမသီတာပျော်သလိုဖြစ်နေသည်။ အဝိုင်းကြီးထိပ်ပါလား အင်း ပါတယ် အမဆင်းတော့မယ်နော် မင်းရော ကျနော်လဲဆင်းမှာ မသီတာအရှေ့ထွက်သွားသည်၊ စိတ်ထဲတော့သိပ်မသင်္ကာ ခုနကတော့ မရေမရာပြောပြီး ခုဆင်းတော့ သူနဲ့တစ်မှတ်တိုင်တည်း။ တိုးဆင်းကြတော့ သူ့နောက်ကခပ်နွေးနွေးတစ်ချောင်းက ကောင်လေးဖြစ်ဖို့များတယ်လို့သူတွေးလိုက်သည်။ ကားအောက်ရောက်တော့ မောင်လေးရှာမယ်လိပ်စာပေးလေး အမကူရှာပေးမယ် အဲ . . . လိပ်စာကပျောက်သွားပီအမရဲ့ အဒေါ်ပြောတာက မှတ်တိုင်နားမှာပဲတဲ့ အဲ့ဒါဘယ်လိုရှာမလဲ နာမည်ကော နာမည်က အဲ ဒေါ်မြခင်တဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပြောတာပဲ၊ ကျွန်တော်လဲအနီးအနားလိုက်ကြည့်ပီး မတွေ့ရင်ပြန်မှာပါ အင်း . . . . အကူအညီလိုရင်ပြောနော် အမက ဒီမျက်နှာခြင်းဆိုင်နားကတိုက်မှာနေတာ ဝင်လည်ပေါ့ ကျေးဇူးနော်အမ . . . ဟို ရေလေးတခွက်လောက်သောက်ပီးမှ သွားရှာမလားလို့ ဒီကောင်လေး သူ့ကိုတော့စိတ်ဝင်စားနေတာသေချာပီ ဒီအရွယ်ကြီးကို၊ သူကလဲဒီကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီမဟုတ်လား။
ဒီကောင်လေးနှင့်ထပ်ပတ်သတ်ချင်သေးရ်ျ အိမ်သို့အလည်ခေါ်သွားလိုက်သည်။ အင်းလေ . . . အမအိမ်မှာရေလိုက်သောက် ပီးမှရှာပေါ့ ဟာ ကျေးဇူးဗျာ အမကသိပ်လှသလို သဘောလဲသိပ်ကောင်းတာပဲနော် အမယ် မောင်လေးက မြှောက်တက်သားပဲ ဟင်းဟင်း ပြောဇမ်းဘာစားချင်လို့လဲ အာ အမကလဲ တကယ်ပြောတာပါ ကဲ အမကဘယ်မှာလှလို့လဲ တောသူကြီးကို အာာ အဲလိုမပြောပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော့မျက်လုံးထဲမှာတော့ အမကသိပ်ကိုလှပါတယ် အတည်ကြီးပြေနေတာ၊ မသီတာတောင်ရှက်သွားတယ်။ ဖြူဖြူနုနုကောင်လေးက သူ့ကိုလှတယ်ဆိုတော့ သူမသိပ်ကျေနပ်သွားသည်။ ကဲ အပြောလေးတွေလျှော့ ဒီတိုက်ပဲ အပေါ်ရောက်မှမင်းစားချင်တာကျွေးမယ် ဗျာ တ ကယ် နော် ဟဲ့ . . . . သြော် ဒီကလေး ရှက်ရှက်နဲ့မသီတာပြေးတက်သွားသည်၊ အနောက်ကကောင်လေးကတော့ သူ့ဖင်တုန်းတွေလှုပ်သွားတာကိုကြည့်နေတော့မည်။ မသီတာအခန်းက ဒုတိယထပ်မှာ တံခါးဝရောက်တော့ ဖြူဖြူနုနုနဲ့ပိုးဟတ်ဖြူလေးကို စချင်စ်ိတ်ဖြင့် ကဲ ရေပဲရမယ်နော် ဒါနဲ့ ရှင်လေးက ဘာစားချင်လို့တုန်း ဟွန်း ဟွန်း ကောင်လေးမှာ ရှက်သွားပြီး မျက်နှာကြီးရဲလာသည် အာ ဟို ရေပါပဲဗျာ တခြားဟာမဟုတ်ပါဘူး အမကိုနောက်တာပါ ဆိုသော်လည်း သူ့အကြည့်တွေက မသီတာရင်သားတွေမှမခွါ၊ ခက်ပါပြီခလေးရယ်။
အပျိူလေးတစ်ယောက်လို သူမရင်တွေဘာတွေခုန်လို့။ ကဲ ထိုင်ဦးမောင်လေး အမရေသွားယူပေးမယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါနော် ဒါနဲ့ မောင်လေး နာမည်က ကျွန်တော်နာမည် အာကာပါ အမကရော အမနာမည် သီတာ တဲ့ ရော့ရေသောက်လိုက်ဦး သူ့ဘဝမှာသူ့အမျိုး သူ့မောင်လေးတွေကလွဲပြီး ဒီအရွယ်ချာတိတ်လေးတွေနဲ့မဆက်ဆံဖူး၊ ဒီဖြူဖြူသန့်သန့်ကောင်လေးကို သူစိတ်ဝင်စားသွားသည် ပြီးတော့ ဒီကောင်လေးကလဲ သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအထိရောက်လာတာမဟုတ်လား။ ကောင်လေးကတော့ ရှက်နေတာနဲ့ စမှာမဟုတ် သူကပဲ ကဲ ခနနားဦး နဲနဲအိုက်တယ် အမအကျီင်္လဲလိုက်ဦးမယ် ပြီးမှ အမပါထွက်ကူရှာပေးတာပေါ့ မသီတာအခန်းထဲဝင်သွားပြီး ကောင်လေးချောင်းချင်ချောင်းလို့ရအောင် တံခါးမပိတ် လိုက်ကာကြားမှမြင်နိုင်သည်လေ။ အပေါ်အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်တော့ သူ့ရင်သားနှစ်ဆိုင်ဟာသိပ်မကြာခင်ကြုံတွေ့မယ့်အရေးအတွက်ကြွားကြွားကြီးစောင့်မျှော်နေကြတယ်။ ဘရာဇီယာကိုချွတ်လိုက်တော့ အို နို့သီးခေါင်းလေးတွေပါထောင်လို့ပါလား။ ထမီတစ်ထည်ကောက်လဲလိုက်ပြီး မှန်ထဲကကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေးခမျာမျက်လုံးကြီးကိုပြူးလို့၊ သူကျေနပ်သွားသည်။ အကျီတစ်ထည်ကောက်ဝတ်မယ်လုပ်တော့ ဘရာဇီယာမဝတ်တော့ပဲ ဒီအတိုင်းအကျီတထပ်တည်းဝတ်ပြီးပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ငါ့မောင်က လူချောပဲ၊ ကျောင်းမှာဆို စော်တွေဝိုင်းနေမှာ အာ . . အမကလဲ စော်မရှိပါဘူး အမယ် ဟုတ်လို့လား ဒီလောက်ချောတဲ့ လူချောလေးကို အမကတော့လုပ်ပီ နဲနဲပါ အဟဲ အမ မသီတာကမှ တကယ့်မိန်းမလှ အမယ် တောသူကြီးကို ဘယ်မှလှလို့လဲ မင်းကျောင်းမှာမှ ဆော်လှလှလေးတွေ ကျတော်တို့မကြိုက်ပါဘူး ပိန်တာရိုးတွေ အမသီတာတို့လို အလုံးအထည်မျိုးမှ တကယ်လှတာ ပြောပြောဆိုဆို မျက်လုံးက မသီတာရင်သားဆီကမခွာတော့ ကြည့်ရင်း နို့သီခေါင်းကလေးမှာလူကြည့်တော့ထောင်လာသဖြင့် အကျီပေါ်မှမြင်နေရသည်။
ဒါဆိုဒို့က ရုပ်လှတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းကလှတာပေါ့ ဟုတ်လား အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ ဒီမျက်နှာနဲ့ ဒီဘော်ဒီလိုက်တယ် လှတယ်ပြောတာ အဲ့လို့ကောက်ကြောင်းလှလို့ မင်းကားပေါ်မှာကပ်နေတာမဟုတ်လား ဟွန့် မျက်စောင်းလေးနဲ့ညုလိုက်တယ် အာ အမကလဲ လူတိုးလို့ပါဗျ ကောင်လေးမျက်နှာတော်တော်၇ဲသွားသည်၊ နောက်တဆင့်ထပ်တင်မှဖြစ်မယ်။ အာကာထိုင်နေတဲ့နားသွားထိုင်ပြီး အမယ် ဘာလူတိုးလို့လဲ အောက်ကလဲ တောင်နေပီးတော့ အဲ အဲဒါက ဟို ကပ်နေလို့ပါ ပီးတော့ အမဖင်ကြားထဲကိုလဲ လာထောက်တယ်လေ ဟုတ်တယ်မို့လား မသီတာစကားကြမ်းကြမ်းပြောလေ့မရှိပါ၊ ရှက်နေတဲ့ကောင်လေးကို ပိုရှက်စေချင်လို့ပြောရင်း သူစိတ်ပိုပါလာသည်။ ဘာအခုမှခေါင်းငုံ့ထားတာလဲ ပြောလေ ဘာလို့ဒို့ဖင်ကိုလာထောက်တာလဲလို့ ဟို ဟို မပြောတက်ဘူး ပြန်တော့မယ် အမယ် လူကိုကားပေါ်မှာထောက်တုန်းကထောက်ပီး ခုမှဘာပြန်မယ်လဲ မရဘူး ပြော ဘာလို့အမကိုလာထောက်တာလဲ ဟို ဟို အမစိတ်မဆိုးနဲ့နော် အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အမ အဲ ဖင်က သူများတွေထက်လှလို့ ကြီးလဲကြီးလို့ ကျွန်တော်ထောက်မိသွားတာပါဗျာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဘာပဲပြောပြောသူ့ဖင်ကိုလှတယ်လို့ပြောတာ မသီတာကျေနပ်သွားပြီး ရှက်လဲရှက်သွားသည်။
စိတ်မဆိုးပါဘူးအာကာလေးရယ်၊ တကယ်လား ဒို့ဖင်လှတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလှတာလဲ ကျတော်မပြောတက်ဘူးဗျ သူများထက်တော့လှတယ် လုံးတင်းပြီး ဘောလုံးကြီးလိုပဲ ဆိုတော့ မောင်လေးက ထိချင် ကိုင်ချင်နေတာလား ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ အမစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကောင်လေးကို သနားပြီးပါးလေးကိုနမ်းလိုက်တယ် ဟင့်အင်း အမှန်တိုင်းပြောရင်စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် မင်းကိုဆုတောင်ချဦးမှာ ကဲပြောပါဦး အာကာကိုင်ချင်နေတာဖင်တစ်ခုတည်းလား အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ တကိုယ်လုံးပဲအမရယ် ဟယ် . . ဒို့နို့တွေရောပေါ့ ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲ ကျတော် မပြောတက်ဘူး၊ ဟို အမကိုကိုင်ချင် နမ်းချင်နေတာပဲသိတယ် ကဲ ရှက်မနေနဲ့တော့အာကာ မင်းကတကယ် ရည်းစားမရှိ မိန်းမမလုပ်ဖူးတာလား ဟုတ်ကဲ့ တကယ်ဟုတ်ပုံရပါသည်။ လူပျိုလေးကိုရှင်ပြုပေးရမည်ဆိုတော့ သီတာစိတ်ကြွလာပြီး သီတာကပဲစနမ်းလိုက်သည်ထင်သည်၊ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုဆက်သွားတော့ အာကာလက်တွေက မသီတာရင်သားတွေဆီမရဲတရဲရောက်လာသည်။ ခုထိရှက်မနေသေးတာ တော်သေးတာပေါ့။ ဒါတောင် မကိုင်ရဲသလိုကိုင်နေသဖြင့် သူမကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြလိုက်ရသေးတယ်။ ခြေတုန်လက်တုန်နဲ့ကောင်လေးနှင့်နမ်းနေရတာ မထင်မှတ်လောက်အောင် ရင်ခုန်နေရသည်။ သူ့နို့တွေကိုညှစ်ရဲလာပြီး ပေါင်တွေကိုပွတ်ပေးသည်။
သီတာလဲ သူ့ပုဆိုးအောက်မှထောင်နေတဲ့သူ့ဂျိုးလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ ဟော့တော့ နမ်းနေတာကိုခွါပြီး သေချာပြန်ကြည်ံလိုက်တယ်၊ သူကိုင်လိုက်မိတာဒီကောင်လေးဟာမှဟုတ်ရဲ့လား။ သူထင်တာကဖြူဖြူဖျော့ဖျော့ကောင်းလေးမှာ သေးသေးလေးပဲရှိမယ်ပေါ့ လက်တွေ့တွေ့လိုက်ရတာက ဦးအောင်မိုးထက်ကြီးပြီး သူ့ယောကျာင်္းနီးပါးလောက် တောင်မတ်နေတာနေတဲ့သူ့အရွယ်အစားကိုသဘောကျသွားတယ်။ ဂွင်းတော်တော်ဆော့တယ်ထင်တယ်။ သူကျေနပ်သွားပြီး ပုဆိုးဆွဲချွတ်လိုက်တယ်၊ သူ့အကျီကိုလဲချွတ်ပေးလိုက်တော့ အာကာမှာ သူ့နို့ကြီးတွေကို ကိုင်ကြည့်ညှစ်ကြည့်လုပ်နေသေးရ်ျ စို့ခိုင်းလိုက်ရသေးသည်။ သူကတော့ ကောင်လေးလီးကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးဆုပ်ကိုင်ပြီး ကွင်းတိုက်ပေးနေလိုက်တယ်၊ ခနနေတော့ အာကာ မောင်လေး ဒီမှာကြည့်ဇမ်း မတ်တက်ရပ်ပြီး ကျန်နေသေးတဲ့သူ့ထမီပါချွတ်ပြလိုက်တယ်၊ အာကာ့မှာ ပါးစပ်အဟောင်းသား လှသေးရဲ့လား အာကာ သိပ်လှတာပဲ မသီတာရယ် ဒါလေးကော မလိုချင်ဘူးလားခလေးရယ် သူ့စောက်မွှေးတွေကိုထိုးဖွဆော့ပီးမေးလိုက်တာ ပြန်မဖြေနိင်ဖြစ်နေတဲ့ အာကာမျက်နှာနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တယ် အာကာမှာဘာမှမလုပ်တက် ရုပ်ရှင်တွေထဲကိုလျှက်ကြည့်ဖို့လျှာထုတ်လိုက်ပေမဲ့ အမွှေးတွေကိုပဲယက်မိတယ်။
သူသင်ပေးမှရတော့မယ့်ပုံပဲ။ အခန်းထဲသွားကြရအောင် ခလေးရယ် ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ မသီတာဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး အနောက်ကအမြန်လိုက်သွားတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး ကုတင်ပေါ်တင်ပါးလွှဲထိုင်နေတဲ့မသီတာကို နမ်းတယ်၊ သူသဘောကျနေတဲ့ နို့ကြီးတွေကိုလဲ အားရပါးရပင့်ကိုင်တယ်။ မသီတာကလဲ အာကာ့လီးကိုပိုမာတောင်လာအောင်ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဂွင်းတိုက်ပေးပီး ပိုမာတောင်လာတော့ မသီတာလဲဂွင်းတိုက်တာရပ်လိုက်တယ်၊ ပို့မယ့်ပို့ကုတို့ရောက်အောင်ပို့ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကောင်လေးကိုနတ်ပြည်ပို့ဖို့ သူစေတနာအပြည့်နဲ့ ကုန်းစုပ်ပေးလိုက်တယ်။ မသီတာရဲ့လက်နဲ့ ဂွင်းဆွဲပေးနေတုန်းကခံကောင်းကောင်းနဲ့ခံနေတဲ့အာကာဟာ နွေးထွေးစိုစွတ်တဲ့မသီတာရဲ့နှုတ်ခမ်းအရသာနဲ့တွေ့တောင့် အား ခနဲတစ်ချက်အော်လိုက်တယ်၊ နာလို့မဟုတ်ဘူး သိပ်ကျေနပ်သွားလို့။ ရုပ်ရှင်တွေ စာတွေထဲမှာဖတ်ဖူးတွေ့ဖူးပေမဲ့ မသီတာက သူ့ကိုစုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးလေ။ မသီတာလဲ တခါမှဒီလောက်မထန်ဖူးပေမဲ့ ဘာမှမသိတဲ့ကောင်လေးကို ဆရာလုပ်ချင်ဇောနဲ့ သူသိသူတက်တာတွေအကုန်လုပ်ပေးရင်း သူစိတ်ပိုကြွလာတယ်။ သူ့ယောင်္ကျားနဲ့သူတောင်အမြဲမစုတ်ပေးဘူး ဒီကောင်လေးနဲ့မှ သူထန်နေတာကိုလဲ သူအံသြတယ်။ အား . . စူး . . အ မ အား . . ကောင်လေးပီးချင်နေပီမှန်းသူသိလိုက်တယ်၊ တခါမှအရည်မမြိုဖူးပေမဲ့ ကောင်လေးရဲ့လူပျိုရည်ကိုသောက်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးပီး သူပါးစပ်ထဲကမထုတ်ပေးလိုက်ဘူး။
အား . . အာ . . ကောင်းတယ်အမ အာ ထွက်ကုန်ပီ သူ့မျက်နှာကိုဆွဲခွါဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သီတာစုတ်ထားတာကိုမလွတ်ပေးတော့ သီတာ့ပါးစပ်ထဲမှာပဲပီးလိုက်တယ်။ ကောင်လေးအရည်တွေအများကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ထုတ်နေတာအတော်ကြာတယ်။ ပီးတော့ သီတာနဲနဲပြို့သလိုဖြစ်ပေမဲ့ ကျေကျေနပ်နပ်မြိုချလိုက်တယ်။ အာ အယ်မ ကန်တော့နော် ကန်တော့ ရပါတယ် မောင်လေးရယ် မင်းကိုချစ်လို့မင်းလူပျိုရည်တွေကိုမြိုချလိုက်တာ လို့ပြောလိုက်တော့ အာကာချက်ချင်းသူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုဆွဲနမ်းတယ်။ သူ့နားနားကပ်ပြီးလဲ ချစ်လိုက်တာအမရယ် ကောင်လေးကချစ်တယ်ပြောလို့ သီတာကျေနပ်သွားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်မှာနမ်းရှုပ်ရင်း အာကာက သူကိုင်ချင်နေတဲ့ဟာအကုန်ပွတ်သပ်ကြည့်တယ်။ ပြည့်တင်းနေတဲ့ အိုးကားကားကြီးတွေကို ပေါင်အောက်ကပင့်ကိုင်ညှစ်ဖျစ်တော့ အမွှေးတွေဖုံးအုပ်နေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးဆီလက်ရောက်သွားတယ်။ အမကိုလဲ ကျွန်တော်ပြန်နမ်းပေးမယ်လေ အင်း ဘာကိုနမ်းမှာလဲ ပြုံးစိစိနဲ့ သိသိကြီး၊ ဒီကောင်လေးပြောတာကြားချင်လို့တမင်မေးတာအမ ဒီဟာလေ အာကာရှက်မနေနဲ့ကွာ ခနကပဲသူ့လီးကိုစုပ်ပေးပီးပီ သူတောင်ဒို့ပါးစပ်ထဲ လရည်တွေပန်းပီးတော့ အခုဘာပြန်နမ်းမှာလဲ မျက်နှာရဲခနဲဖြစ်သွားပေးမဲ့ အမ အဖုတ်ကိုလေ ယက်တက်လို့လား အမသင်ပေးလေ ခစ်ခစ် အင်းသင်ပေးမယ် ပြန်မေးလေ အာကာ အမအဖုတ်ကိုနမ်းပေးမယ်လေ မနမ်းနဲ့ . . . . . ဒို့စောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေး သီတာလဲအဲ့လိုပြောရတာ အရသာတွေ့လာတယ် ပြောပီးတာနဲ့ သူ့ပေါင်တွေကိုကားပေးလိုက်တယ်၊ အာကာလဲတက်သလောက်မှတ်သလောက် ယက်တော့တာပဲ၊ ပေါင်ခြံတွေကိုနမ်းတယ် ဆီးခုံအမွှေးတွေကိုယက်တယ် ပီးတော့ အကွဲကြောင်းကြီးကိုအပေါ်ကနေယက်နေတယ်။
သီတာအသည်းတယားယားဖြစ်နေပေမဲ့ မထိရောက်တော့ အမှန်ကိုသင်ပေးရဦးမယ်။ အာကာ့ခေါင်းကို ဆွဲမလိုက်ပြီး အကွဲကြောင်းလေးကိုလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲဟလိုက်ပီး ဒါလေးကိုယက်ရတယ် ခလေးရဲ့၊ အာကာ့ခေါင်းလေးကိုဆွဲကပ်ပြီးနေရာချပေးလိုက်တယ် ဒီအဖုလေးကို စုပ်ပေး အား ဟုတ်တယ် အဲ့လိုမျိုး အားစ် အာကာကလဲသူသင်ပေးသမျှလိုက်လုပ်တယ်၊ အကွဲကြောင်းကြီးကလဲလျှာနဲ့ယက်တာအောက်ကခရေညိုကြီးအထိပဲ။ သီတာသင်သာသင်ပေးရတယ် တခါမှအယက်မခံဖူးပေ၊ လက်တဖက်ကကောင်လေးခေါင်းကိုကိုင် နောက်တဖက်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေရင်းကောင်းကောင်းခံစားပစ်လိုက်တယ်။ ဒီကောင်လေးကိုသင်ရင်း သူလိုချင်တာတွေကိုပါလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်၊ ကောင်လေးက ခရေညိုကြီးပါယက်တော့ သူ့မှာတွန့်ခနဲပဲ။ သူဖ်ီလ်းပိုတက်လာတော့ အာကာ့ခေါင်းလေးကိုထိမ်းကိုင်ရင်း သူ့အဖုတ်အုံကြီးနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ ကောင်လေးမျက်နှာရွှဲသွားတော့ သူပိုလိုချင်တာပီ။ ခုနက တချီပီးထားပေမဲ့ ကောင်လေးဟာကမကျသေးဘူး။ အား ကောင်းလိုက်တာ အာကာရယ် . . . ဟုတ်တယ် အဲ့လို . . . ရပီမောင်လေး ဒို့လိုချင်ပီ (ယက်နေတာကိုရပ်ပီး သူ့ပေါင်ကြားဝင်တာတယ်) ကျတော် . . လိုးရတော့မှာလား အင်း ဟုတ်တယ် လိုးရတော့မှာ မင်းလီးကြီးကိုလိုချင်ပီ မင်းလီးကိုဒို့ထဲထည့်လိုက်တော့ အား ဖြေးဖြေးမောင်လေး အင်း အပေါက်သေချာချိန်ပီး အားနဲ့ထိုးထည့်လိုက်တာ ရုပ်တရပ်ဆိုတော့နာသွားတယ်။
ကောင်လေးလဲ သူ့ဟာကြီးလို့ဆိုပီးကျေနပ်နေသည်။ ကောင်လေးအတွက်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့ အငမ်းမရဖြစ်တော့သည်။ အထနှေးပေးမဲ့ စက်ကသွက်တယ်၊ ကောင်လေးနွားငတ်ရေကျဖြစ်လေ သူသဘောကျလေမဟုတ်လား။ အရှိန်အထိန်းပဲခပ်သွက်သွက်ဆောင့်တယ် ပထမအချီပီးထားလို့နဲနဲကြာတာ၊ နောက်အချီကျရင်တော့ပြောပြမှဖြစ်မယ်။ အာကာအတင်းဆောင့်လေ အစိကိုပွတ်မိတာများပီး သူကောင်းလာတယ် အရည်တွေလဲရွှဲနေပီ။ အားစ် . . . ကောင်းတယ် လိုးလိုး ကောင်းလားမောင်လေး ကောင်းတယ် အရမ်းပဲ ဟား . . . မနာတော့ဘူး မဟုတ်လား ဟင့်အင်း . . . ဒို့ကိုအားမနာနဲ့ဆောင့် အား ကောင်းတယ်ခလေးရယ် အင် ကောင်လေးမကြာခင်ပီးတော့မယ်ထင်တယ်၊ ဆောင့်ချက်တွေသွက်လာသည်။ သူလဲအမြန်လိုက်ပီးမှဖြစ်မယ် အာကာ့ကိုအောက်ကနေပြန်ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်ပီး ခါးကိုစကောဝိုင်းသလိုလုပ်ပေးလိုက်တော့ အဝင်အထွက်ပိုထိသလို နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ခံစားမှုဆန်းသစ်စေသည်။
ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်တုန်သွားသောနို့အုံကြီးကိုဆွဲပြီးဆောင့်သည်။ အား ကောင်းလိုက်တာအမသီတာရယ် ရီုး ထွက်တော့မယ် လိုးမောင်လေး လိုး ဒို့လဲကောင်းတယ် ပီးချင်ပီ အားစ် သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူပီးသွားသည်၊ မသီတာ ပီးနေတုန်း အာကာ့ဖင့်ကိုကိုင်ပီး ကပ်ညှောင့်ပေးလိုက်တော့ အရမ်းကောင်းသွားတယ်။ ပူနွေးနေတဲ့ယောနီလမ်းကြောင်းထဲ အာကာ့လရည်တွေအားနဲ့ပန်းဝင်လာတော့တယ်။ ပြီးပါပြီ။
ငါ ဒီ ည တောင် မ ပြန် ချင် ဘူး